किन तोडिन्छन सम्बन्धहरु ?किन आउछन त प्रिय सम्बन्धमा फाटो ? – Saurahaonline.com
किन तोडिन्छन सम्बन्धहरु ?किन आउछन त प्रिय सम्बन्धमा फाटो ?
कतिपय सम्बन्धहरु यस्ता हुन्छन जुन एउटा मात्र हैन अनेकौँ जुनि सम्म पनि गासिन्छ भनिन्छ । रगत को नाता भन्दा पनि गाढा अनि प्रिय ठानिन्छ तर किन ति गाढा भनिएका सम्बन्धहरु तोडिन्छन । किन फाटो आउँछ त ति गहिरो र प्रिय सम्बन्धहरुमा ।
हुन त एउटा कुरामा मात्र अल्झिएर बस्नु भनेको पुरातनबादि सोचको उपज हो भनिन्छ । अनि एउटा कुरामा मात्र खुसि हुदाँ प्रगतिशिल बिचारलाई नकारेको पनि भनिन्छ । तर के यो कुरा सबै क्षेत्रमा लागु हुन्छ त ? यदि सम्बन्धमा पनि परिवर्तनशिल बिचार लाई ग्रहण गर्ने हो भने सम्बन्ध तोडिनु या जोडिनु कुर्नै अनौठो कुरा होईन तर दुई मुटुका बिच सधियौँको लागि सगैँ बाच्ने मर्ने भनि कसम खायर परिवर्तनशिल बिचारलाई ग्रहण गर्नु बेफकुफि मात्र हो ?
मैले देखेको कुरा अनि सुनेको कुरा कहिले काहिँ साना साना कुराले सम्बन्धमा फाटो आउछँ त कहिले त्यस्तै सानो कुराले सँम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउछ । हामि कहिले काहि अनावश्यक घमण्ड गर्छोँ जुन घमण्ड नै सम्बन्ध बिगार्न मलजलको काम गर्छ ।
शुरुवातका पलहरुमा हामि एक को कुरा अर्काले काट्न सक्दैनौँ । जे कुरा भन्दा पनि स्वकार गछौँ तर जब बिस्तारै समय बित्दै जान्छ नि ,हो अनि एक ले अर्कोको कुरामा पनि प्रतिप्रश्न गर्न थाल्छौँ । मन नपरेको कुरामा बिरोध गछौँ ,जुन अर्को तपाईको या तपाईकी लाई मन पदैन अनि फाटो आउछ । कहिले काहि तपाई लाई लाग्दो हो कि मेरो जिबनसाथिलाई धेरै खुसि दिन्छु भन्ने । तपाई उसलाई ठुलो खुसि दिन मरिमेटनुहुन्छ तर त्यहि समयमा तपाई ले उसलाई सानो सानो कुरामा खुसि दिने कुरा लाई बिर्सिरहनु भएको हुन्छ ।
सम्बन्धमा खुसि ल्याउन ठुलो काम नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन कहिले काहिँ सानो सानो कुराले पनि ठुलो खुसि दिन सकिन्छ । तपाई घरमा हुदाँ श्रीमातिलाई भन्दा साथिलाई बढि समय दिनुहुन्छ हो ?यदि हो भने तपाई बिबाहितहरुको श्रीमति तपाईबाट मनग्य खुसि हुनुहुन्न । अनि तपाई आफनो ÷आफ्नी सगँ कुरा गर्दो घरि घर साथिको श्रीमति या श्रीमानको वा अरु कोहि बाहिरि मान्छेको बढि प्रससा गर्नुहुन्छ हो ?यदि त्यस्तो हो भने पनि बिचार गर्नुहोस तपाईबाट तपाईको परिवार खुसि नहुन पनि सक्नु हुन्छ ।
हो शुरु शुरुमा जसलाई पनि सम्बन्ध जोडिदा खुसि लाग्छ ,अनि त्यो सम्बन्ध टिकाउन जस्तो सुकै पहल कदमि लिन सक्छु भन्ने आट आउँछ तर जब सम्बन्धमा पुरानोपनको आभास हुन्छ अनि ति सबै सोचाईहरु हावामा बोलि मिसिए झै , खोलमा पानि बगे झैँ बगेर जान्छ ति सबै सोचाईहरु आखिर किन त ?
के सम्बन्ध समय बित्दै जादा कम हुदै जाने चिज हो र माया ? यदि होईन भने किन त ,ति सम्बन्धहरु शुरुवातका दिनहरु झै अटल रहन नसकेका ,अनि मायामा खल्लोपन देखिएको ।
आजभोलि हाम्रो समाजमा बिबाह अघिका र बिबाह पछिका कतिपय सम्बन्धहरु छुटेको देखेका छौँ । जुन कारण नै हुन सम्बन्ध मा फाटो आउनु । एकले अर्कोलाई राम्रो सगँ नबुझिकन माया गर्छोँ अनि पछि फेरि सम्बन्ध तोडन् बाध्य हुन्छैँ । शुरुवातमा नै ख्याल गरियो भने या एकले अर्कोलाई राम्रो सगँ बुझेर मात्र सम्बन्धमा रहने हो भने यस्ता समस्या नआउन पनि सक्छन ।
अनि एकले अर्कोको अस्तित्वको मतलब नगर्दौ पनि सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस्तै एउटा सगँ सम्बन्धमा हुदाँ हुदैँ अर्को जोडि खोज्नु पनि सम्बन्धमा फाटो आउनुको अर्को एक कारण हो । आजभोलि त अझै बैदेशिक अध्ययनका लागि भनेर नाता पर्ने सगँ पनि बिबाह गर्न पुग्छन अनि ति सम्बनधहरुलाई हामि के भन्ने ,यसरि बिग्रिरहेको छ हाम्रो समाज ।
श्रीमान बिदेशमा रहदाँ ,श्रीमतिले अर्को श्रीमान खोज्ने अनि श्रीमति बीदेशमा भएकाहरुले अर्को यौन साथि खोज्दाँ पनि सम्बन्धहरु बिग्रने ,फाटो आउने गरेका छन ।
यसैले बेलैमा एकले अर्कोलाई चिनेर मात्रै सम्बन्धमा रहन सक्ने हो भने सम्बन्धका बिचमा आउन सक्ने फाटोहरु रोक्न सक्छौँ ।
बिबाहितहरु दिनभर अफिसको काम गर्छन अनि बेलुका घरको काम गरेर थाकेकी आफनी श्रीमतिसगँ अफिसको रिस पोख्छन ,अनि सम्बन्धमा फाटो आउछँ । तपाई अफिसबाट घरमा जादाँ ठुलो कुुरा होईन चकलेट नै लियर किन नजानुस हसिलो अनुहारले श्रीमतिसगँ गफ गर्नुभयो भने तपाईको श्रीमति खुसि हुन सक्छीन । त्यहि ठाउँमा तपाई ठुलो र महङगो चिज लियर गए पनि यदि घर पुगेर तपाईले अफिसको रिस पोख्नु भयो भने सम्झनुस तपाईकी श्रीमति तपाईबाट दुखि हुनुहुन्छ ।
तपाई आफ्नो छिमेकिले कार गिफ्ट दियो,स्कुटर गिफ्ट दियो भन्ने तिर सोच्नुभयो भने तपाईले आफ्नो परिवारलाई कहिले पनि खुसि दिन सक्नुहुन्न । सबै मान्छे लाई महङगो र ठुलो चिजले मात्र खुसि दिन्छ भन्ने पट्ट्कै होईन ,तपाई ले श्रीमति कार,स्कुटर होईन तपाईको श्रीमति तपाईले उपल्बध गराएको बढि समयको कारणबाट पनि खुसि हुन् सक्छीन ।
तपाई सानो कुरामा आफनो परिवारलाई खुसि दिन चाहानुहुन्छ ? त्यसो भए तपाई अफिसबाट घरमा जादाँ सानो चिज नै किन नहोस लियर जानुस र मायालु सोरले ति चिज दिनुस त तपाईको परिवारजनको आखामा छुट्टै रैनक देख्नुहुन्छ । यो कथा होईन एक चोटि गरि हेर्नुस अनि थाहा हुनेछ ,सानो कुराले कसिरी बनाउछँ त परिवार लाई खुसि ।
जिबन धनले मात्रै होईन ब्यबस्थीत तरिकाले खुसि साथ जिउन सकिन्छ । नेपालि समाज अहिले आएर पश्चीमा समाज जस्तै बन्न थालेको छ ,अनि सम्बन्धहरु अनायासै टुक्रन थालेका छन । तर त्यसले हाम्रो अनुकरणीय समाजको अस्तित्व नै धरापमा पारेको छ ।
एक्लो जिबन जिउन सायदै सबैलाई असहज हुन्छ ,त्यसैले त अर्को एउटा सहाराको खोजि गरिन्छ । हो त्यहि साहाराको नाम नै हो जिबन साथि । जिबन साथि हास्न मात्रै होईन ,दुख सुख बाडन ,रमाउन,सामान्य झगडा गर्न ,अनि सबै सबै कुराको लागि चाहिन्छ । त्यसैले श्रीमान या श्रीमति वा गर्लफ्रेन्ड या ब्वाईफे्रेन्ड आदि सबै एक अर्कोको लागि जिउने आधार हुन् ।
दुबै पक्ष बिचको खुसि र सहि सँम्बन्धले मानिसलाई खुसि साथ बाच्न सिकाउछ । बिछोडले त केबल पिडा र दुख दिन्छ तर सम्बन्धले ति सबै पिडा ,दुख अनि एक्लोपनको अवस्थाबाट मुक्ति दिन्छ । त्यसैले सम्बन्धमा आउन सक्ने दरारलाई बेलैमा बुझ्न् सर्कौ र दुई मुटुका बिच आउन सक्ने त्यस्ता फाटोलाई सधाका लागि टाढा भगाऊ यो र्ने सम्बन्ध स्थायी बनाउने एउटा उत्तम बिकल्प हुन सक्छ ।